Rajendra Khadgi ले भारतीय पत्रकार सुधिरलाई मा#र्छु भन्दै दिए चेता#वनी, भने- राँगा ढालेजस्तै ढाल्छु (भिडियो सहित) – Wow Sansar
भिडियो तलको समाचारको अन्त्यमा राखिएको छ यो पनि पढ्नुहोला चिया र स्वादिष्ट व्यञ्जन तयार गर्नका लागि अदुवाको प्रयोग निकै उपयोगी मानिन्छ र साथै सौन्दर्यका लागि पनि त्यति नै महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ, यी सबैलाई थाहा भएकै जानकारी हो । तर के तपाईलाई थाहा छ ? अदुवा तपाईको कपालको लागि पनि निकै उपयोगी हुन्छ, यो सहि कुरा हो । यदि तपाई अझै सम्म यी फाइदाको बारेमा अन्योलमा हुनुहुन्छ भने विशेषगरी यो जानकारी तपाईकै लागि हो ।
४- कपालको रूखोपन कम गर्नुको साथै यसलाई पोषण प्रदान गर्न अदुवा निकै उपयोगी हुन्छ । यसलाई कागतीको रसमा मिलाएर कपालमा लगाउनुहोस् र मसाज गरिसकेपछि कपाल धुनुहोस् । यसले कपालको रूखोपन तुरुन्त कम हुन्छ ।एजेन्सी । एउटा मानिसले एक पटकमा कतिवटा बच्चा जन्माउन सक्ला ? २, ३ वा ४ ? तर इन्डियानामा ४२ वर्षकी मारिया हर्नान्डेज नामक महिलाले एकैपटक ११ बच्चाहरुलाई जन्म दिएर विश्वलाई नै चकित तुल्याइदिएकी छिन् । मारिया हर्नान्डेज नामक महिलाले १७ मिनेटमा ११ बच्चालाई जन्म दिएकी हुन्। यो डेलिभरीको केस हेरेपछि अस्पतालको सबै डाक्टर अचम्ममा परेका छन् ।
मारिया हर्नान्डेजको डेलिभरिको लागि धेरै दुखाई भएपछि मात्रै अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो । मारियाको परिवारले यसलाई एक चमत्कार मानेका छन् र सबै बच्चा स्वस्थ भएको कुरालाई लिएर धेरै नै खुशी छन् ।
मारियाका पतिले यसलाई एक चमत्कार मानेका छन् र अहिले धेरै मानिसहरु उनलाई बधाई दिन थालेका छन् र उनले पनि शुभेच्छुकलाई आभार प्रकट गरेका छन् । यस्ता घटना विश्वमा निकै नै विरलै मात्रामा घट्ने गर्छन् ।
Prevक्या’न्सर लागेर मृ’त्यु भएका श्रीमान’को का’जकिरिया ग’र्ने खर्च जुटाउन सडकमा – हेर्नुस् भिडियो सहित
Nextअक्षय कुमार र ट्विंकल खन्ना को २० औं वैबाहीक वर्षगाँठ, दुवैले एकअर्काको लागि लेखे भावुक स्टेटस्
गायिका इन्दिरा जोशी प्रेममा, पहिलो चोटी प्रेमीको हात समाएको तस्वीर राख्दै यस्तो यस्ताे लेखिन् (हेर्नुहाेस्)